Indlela Ephakathi Kwee Tees: Ngaba Yenzelwe uBen Hogan?
Ngaba uBen Hogan Wadalwa Umthombo weNdlela yoLuntu ngokuLungisa kwiTeing Grounds?
Uyayazi ukuba umgwaqo ogqityiweyo uhamba ngokugqithiseleyo odibanisa ibhokisi yee tee kwiibhokisi zee-front tee, okanye izizathu zokungena kwi- fairway , kwii-golf courses? Yintoni ebizwayo, kunjalo?
Abanye abagadi begolfu bayibiza ngokuthi "indlela kaHogan" okanye "indlela kaHogan," ekukholweni ukuba uBen Hogan wayeyi-golfer ecela ukuba baqale ukugaya umendo. Kodwa ngaba kunjalo?
Igosa likaHogan's Walkway Legend
Kutheni umgwaqo ogqityiweyo ungasentla, uholele kwi-fairway, kuthiwa nguHogan?
Ingaba libizwa ngokuba nguHogan, okanye ngaba loo mgca nje?
Kukho ngokucacileyo umgca webali kumbali. Xa saqale sibuzwa ngumfundi ukuba sijonge kule minyaka edlulileyo, ndakhangela nabantu kwiGosa leSigqeba seSigqeba seMigangatho ye-Golf. Kwaye izikhulu zeGCSAA zathetha kwiintetho ezingaphezu kweengcali zegalufu ezichaze umyalezo emva kwemvelaphi yendlela.
Indlela yokugungqa, ngokwembali, yaqala ukusikwa kwiiklasi zegalufu emva kokuba uHogan ecelile. Njengoko enye inguqu yebali ihamba, uHogan, emva kokucela i-superintendent ukuba iqhube umzila kuye kwinqanaba ngalinye, wachaza ukuba akazange afikelele embi, ngoko akaze ahambe ngayo. Kwenye enye inguqulelo, yonke into ngeengqungquthela zikaHogan. Ukudlala ngentsasa evelele, akazange afune iikhabhi zebhulukhwe zakhe (okanye izihlangu zakhe) ukuba ahambe emanzini angenawo uhlaza ukuze athole ebhokisini lakhe le-tee ukuya kwi-fairway.
Kodwa Ingaba Ingxelo Yesiqalo Sokuqala Yinyaniso?
Hayi, kuvela imvelaphi yaloo mgwaqo ogqityiweyo kuninzi kuneziganeko zeHogan.
Nali ibali lokwenene, elichazwe ngenye yeendwendwe ezide kunabo bonke kwi-GCSAA kwaye sidlulele kuthi ngamagosa e-GCSAA:
"Kwiintsuku eziphambi kwezixhobo zokusetyenziswa kwamanzi, ii-superintendents ziza kutsala ibhokisi yee tee kwaye ngaphambi kokuqhubela phambili ukuya kwelinye elilandelayo (okanye kwi-fairway), kwakufuneka kuthathe umxhaka ngaphandle kwegesi, uhambe umxhaka, uphakamise ngesandla umgca wecala uze ukubuyela emva kumanzi kwaye uqhubeke. Njengoko unokulindela, le nto ithathe ixesha kwaye yanciphisa inkqubo.Izigqwesileyo zagqiba ekubeni zityule umtya ngaphandle kokuphakamisa umgangatho. ukuba abagadi begalufu abazange bahambe ngokukhawuleza. "
Lo mongameli okhuselekileyo wakhumbula lo mkhuba wokugaya ukususela ekupheleni kwee-1940 - uyise wayenza kwiklasi yegalufu apho wayesebenza njengomgcini-mgcini-mgcini.
Ngoko ke ibali lokwenene: uHogan wayenanto yokwenza nayo.
Yaye ngelixa iindwendwe ezininzi zibhekisela kumgca ogqityiweyo nje njengendlela yokuhamba okanye indlela, abanye bayabiza - kunye nabadlali begalufu bayabiza - iHogan's Walkway.
Kukho enye inzuzo ebonakalayo kumendo phakathi kwee tee, kwakhona: Inceda abagadi begolfu bagcine izicathulo zabo ukuba bangabi manzi kwiintsuku eziphosakeleyo okanye ngethuba lokusa. Kwaye endaweni yokubuyela kumda we-teeing umhlaba kwaye wehla enqwelweni yendlela, i-golfer inokuhamba phambili ngqo kwi-tee.
UBob Hope Quotes NgeGalufa
Ngaba i-Tiger Woods yayitshintsha ngokusemthethweni igama lakhe lokuQala lokuQala igama elithi 'Tiger'?
Ngabe iTiger Woods yenze njani i-National First TV?
Yintoni efanelekileyo yeTiger Woods?
ULarry Nelson, iHolo yoLwazi iGolfer
Amalungu amatsha abakhethiweyo kwiHolo yeHlabathi yeGoli yeFame
UPeter Thomson Umsebenzi weProfayili
Ngaba ngabaMongameli kufuneka ukuba baphumelele kuVavanyo lwezeMpilo yengqondo?
Iingoma Ezilishumi Eziqhelekileyo Ngokuqhawulwa Kweentombi ezimbi
5 Imigaqo-siseko yokuba nabahlali beeKholeji kwiKholeji
I-Supernovae: Ukuhlaselwa kweNkathazo zeNkanyezi ezinkulu
Udlala njani umdlalo weBisque Golf
Imvelaphi ye 'Birdie' kunye 'neMpondo': Indlela ababa ngayo iGrafu Imigomo
Iingcebiso zoFundo kwiGAR isigama
Xa ubhala isiHlomelo seSicelo seSikolo
Hlangana neebhokhwe zeBhedi
I-Valentines Day I-Acrostic Poem Lesson
Ubungqina beNgcinci encinci kuYazezee kwiNqwelwana elilodwa
Inkcazo yoBume beMeko
Umkhonto Othombileyo KwiGalofu: Yintoni Oyiyo, Yintoni Eyibangela
Ziyini ii-Eggs zama-Century?
Indlela yokucocela ibhola lakho lebhola le-Bowling ngeNdlela yokucwiliswa
Ixesha lePietorial of Automobiles
Nuclear Fission Versus Fusion nyukliya
Ukwenza Amagama amatsha ngeConference
Indlela Yokuthetha Nokubhala "Okulungileyo" ngesiTshayina
E-East Coast Hip-Hop